» Al-Shabaab oo magaalada Ceel-dheer ku toogtay qof rayid ah
Al-Shabaab oo magaalada Ceel-dheer ku toogtay qof rayid ah
December 12, 2012 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareWararka naga soo gaaraya magaalada Ceel-dheere ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay gudaha magaaladaas ku dileen mid kamid ah dadka deegaanka.
Dadka magaalada kusugan ayaa Warqaad.com usheegay in Al-Shabaab ay gudaha magaalada soo dhigeen meydka Ninkan oo si weyn looga yaqaanay Ceel-dheer.
Riix Halkan si aad Faah Faahinta dilka udhagaysato
“Gaari nooca dagaalka ah ayay Shabaab Ninkan ku keeneen, waxaana ay soo dhigeen magaalada”ayuu sheegay mid kamid ah dadka deegaanka.
Lama oga ilaa iyo haatan sababta ay Al-Shabaab udilen Ninkan kamid ahaa dadka magaalada Ceel-dheer ee gobolka Galgaduud.
One Response to Al-Shabaab oo magaalada Ceel-dheer ku toogtay qof rayid ah
Galmudug says:	December 12, 2012 at 11:31	Waan ka xunahay dilka ay dilayaan ninkasta oo ay u araakan inuu neceb yahay waydilyaan laakiin wuu dhamaan doonaa dilkaas ee waxaan leeyahay hala aqoon sado cidkasta oo waxa dileysa